नयाँ पुस्तक चाँडै आउँदैछ — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
यो शक्तिशाली पुस्तकमा, यात्रा ली यसलाई उठ्नु समय र वृद्धि हो तर्क छ, हामी बाँच्न सिर्जना बाटो बाँच्न. युवा वा पुरानो, हामी उहाँलाई लागि बाँच्न भनिन्छ गरिएको छ. अहिले. युवा विश्वासीहरूलाई नै समस्या वृद्ध मसीहीहरू रूपमा सामना, तर तिनीहरूले अद्वितीय तरिकामा तिनीहरूलाई महसुस. वृद्धि एक आकर्षक ती कोर समस्या सम्बोधन, गहन, र जीवन-परिवर्तन तरिका.
बस त्यहाँ बस्न छैन: वृद्धि!
बर्टन • डिसेम्बर 4, 2014 मा 6:29 बजे • जवाफ
दाऊदले • डिसेम्बर 25, 2014 मा 3:25 बजे • जवाफ